Dragon Ball Super Season 2: Avoahy ny tsaho momba ny daty sy izay rehetra fantatra hatreto - Pop-Kolontsaina
Dragon Ball Super Season 2: Avoahy ny tsaho momba ny daty sy izay rehetra fantatra hatreto
Ny vanim-potoana voalohany an'ny Dragon Ball Super dia nitazona ny fiarahamonina anime tamin'ny tafiotra. Ny tsangambaton'ny tantara sy ny sarimiaina mahafinaritra dia tsy sangan'asa sangan'asa fotsiny.
Ireo lalam-tantara marobe tamin'ity andiany ity dia nisy fivoarana lehibe, ary nisy fanovana toetra mahatalanjona sasany. Ny arc an'ny Tournament of Power dia iray amin'ireo arcs tsara indrindra Dragon Ball andian-dahatsoratra efa voatery daty.
Ny fizaran-taona voalohany dia nifarana tamin'ny volana martsa 2018, izay nanombohana ny Dragon Ball Legends. Na dia tsara aza ny lalao, ny mpankafy dia liana indrindra tamin'ny hahafantatra ny fotoana hamoahana ny vanim-potoana faharoa an'ny Dragon Ball Super.
Rahoviana no mivoaka ny fizarana 2 an'ny Dragon Ball Super?
Nankalaza ny faha-30 taonany ny Dragon Ball tamin'ny taona 2019. Nisy ny tombantombana fa ny vanim-potoana 2 an'ny Dragon Ball Super mety tonga amin'ny Jolay 2019, saingy tsy nitranga izany.
Avy eo dia nisy areti-mandringana erak'izao tontolo izao, mandefa ny tetik'asa mavitrika rehetra amin'ny fiatoana kely. Miaraka amin'ny fanitsiana tsikelikely an'izao tontolo izao amin'ny normal vaovao, miverina tsikelikely amin'ny lalana ny tetikasa.
Na dia misy aza ny tsaho fa tonga amin'ny 2021 ny vanim-potoana faharoa an'ny Dragon Ball Super, mbola tsy nilaza na inona na inona momba ny daty famotsorana i Toei Animation.
@ToeiAnimation soo Dragonball Super vanim-potoana fanavaozana 2?
- Io no toerana avo ho ahy (@_RealJalil) 18 Janoary 2021
Rahoviana no milatsaka ny dragon ball super season 2 @ToeiAnimation
aiza i john cena izao
- Bitsika Moe (@MoeDarYt) 5 Febroary 2021
Roa taona mahery izay no lasa hatramin'ny nifaranan'ny andiany, ary mbola mitaky vanim-potoana vaovao an'ny Dragon Ball Super ireo mpankafy.
fa addison ve hamoaka dragon ball super season 2 ve ry zareo?
- TGX (@ItsTGx) 5 Febroary 2021
Mijery baolina dragona be dia be aho
Andiany 2 no hanaovan'izy ireo izany
- ChackoSyaki (manambady) (@chackosyaki) 4 Febroary 2021
Na eo aza ny tsy fahampian'ny vaovao momba ny vanim-potoana faharoa, mino ireo mpankafy fa hatao amin'ny farany izany. Ny manga dia tsy maintsy mandroso alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana faharoa.
milalao mafy hahazoana ny sipanao
Raha ny filazan'ny mpampiasa Twitter iray, rehefa navotsotra ny Season One of Dragon Ball Super dia efa tao amin'ny Goku vs Hit ilay manga. Raha vao mandroso ampy amin'ny fizarana faharoa ny manga dia mety hivoaka ilay andiany.
Tonga tokoa ny vanim-potoana 2. Tsy maintsy miha lavitra ny manga ka ampy ny atiny. Raha vao nanomboka ny anime Super dia efa tao amin'ny goku vs hit ny manga. Faharetana fotsiny izany
- Gogeta (Hero) (@Parody_Gogeta) 4 Febroary 2021
Mba hanamarinana fa ny Dragon Ball Super Season 2 dia voamarina fa hitranga, hoy hatrany ny manga, ny tantara dia tsy vita fotsiny noho ny arc an'ny Tournament of Power, dia mbola mandeha ihany pic.twitter.com/BPpy9EcAEw
- Frank Zekken (@yuukisimp) 7 Febroary 2021
Dragon Ball Super, arahin'i Dragon Ball Super: Broly, ataovy avo dia avo ho an'ny andiany Dragon Ball. Manantena ireo mpankafy fa ny vanim-potoana faharoa dia mety mihoatra ny fenitra napetraka.
Akira Toriyama dia mety ho tafiditra amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny Dragon Ball Super sahala amin'ny niarahany tamin'ny saga Broly.
tsy tsapako fa tiana aho amin'ny fifandraisako
efitrano malaza wwe 2015
inona ny gidro manidina gidro
tsaboina toy ny zazakely sakaizany